Huawei wearables ga-enwe ike ịwụnye ngwa sitere n'aka ndị mmepe ndị ọzọ | Gam akporosis
Huawei egosila na-adịbeghị anya na ọ maara etu esi eme igwe dị egwu mana nke ahụ kwa, marakwa etu esi eme smartwatches. Agbanyeghị, mmachi gọọmentị US ewepụla ọmarịcha egwu ya na ahịa ekwentị, ọ bụghị nkewa smartwatch.
N'ezie, na nkeji iri na ise ikpeazụ nke 2020, Huawei malitere ịgbasa karịrị 10 nde smartwatchess Usoro okike nke ngwa maka elekere Huawei nwere oke na ngwa nke ndị nrụpụta, mmachi dị mkpa nke ụlọ ọrụ Asia kpebiri iwepụ.
Site na nke a, ndị mmepe ngwa ga-enwe ike ibuga ngwa ha LiteOS, sistemụ arụmọrụ nke Huawei smart ese. Ruo ugbu a, Huawei ekweghị ka ịdị adị nke ngwa ndị ọzọ iji gbochie elekere ha 'kediegwu ndụ batrị ka emetụta ngwa ndị ha anaghị achịkwa.
Ihe mbụ Huawei wearable nke mkpebi a bụ Huawei GT 2 Pro, ihe nlere nke nwere ngwa Iri ise na mkpofu ya, ngwa nke na-enye karịa 900 dị iche iche ọzụzụ. Iji nyefee ngwa LiteOS, ndị mmepe ga-eji ngwa mmepe Huawei, ngwa nke amalitelarị ịpụta maka ndị mmepe obodo.
Dabere na Huawei
Ebumnuche Huawei bụ inye nkwado zuru oke maka ndị na-eweta ọdịnaya ngwa niile, na-ekpuchi usoro niile sitere na okike, mmepe na nkesa na ọrụ na nyocha data.
Nke a yiri ọtụtụ usoro eji etinye ngwa na ụlọ ọrụ ndị China emeela nkwalite nke AppGallery yana usoro okike metụtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Huawei wearables ga-enwe ike ịwụnye ngwa sitere n'aka ndị mmepe ndị ọzọ